tamin’ireo mpiara-miasa aminy ny sabotsy 05 desambra teo. « Misy ny ezaka nataon’ny Fitondram-panjakana mba ahafahana mijery hoe : inona no ahafahana mampihena ny fovangongoana amin’ny trano iray, ka noho izany no nanamboarana ny « bloc Amical 2 » izay may ka nananganana vaovao sy ireo « dortoir » lehibe miisa 2 izay ho an’Ankatso I sy Ankatso II », hoy ny Minisitra. Notsipihiny fa hita ny olana mianjady amin’ny mpianatra fa ny tena goavana dia ny mahakasika ny trano, ary miditra amin’ny fahavaratra rahateo isika. Nivoitra taorian’ny fifampiresahana tamin’ireo orinasa manao ny asa fa hatao mialohan’ny faran’ny taona ny fandraisana ara-teknika «Réception téchnique » satria nilaza rahateo ny Minisitra fa tokony hihazakazaka kely mba ahafahana mamaha ny olan’ny mpianatra. Mbola hijery fotoana araka izay maha mety azy kosa ho an’ny fitokanana. 300 mahery eo no ho zakan’ireo trano lehibe miisa roa vao natsangangana, ary ho an’ny Bloc Amical II kosa dia ireo mpianatra efa nonina tao ihany no haverina ao.
TSY EKENA NY FIVAROTANA NY TRANO
Tsy tokony hisy ary tsy azo ekena ny fivarotana ny trano satria an’ny Fanjakana fa tsy an’ny mpianatra na an’olon-tsotra ny trano, hoy ny Minisitry ny fampianarana ambony. Ny eo anivon’ny CROUA (Centre Régional des Œuvres Universitaires à Antananarivo) ihany no afaka mamoaka ny fisitrahana na « attribution » ho an’ny trano. Misy kosa ny kaomisionina ahitana ny solonten’ny mpianatra. Tsy sanatria handidy hanapaka amin’ny lafiny « administration » anefa ny mpianatra, fa manara-maso kosa amin’ny fangaraharahana.
Légende : Nandritra ny fidinana ifotony teny Ankatso nataon’ny Minisitra sy ny ekipany